by USharon Greenthal
Ukufumana ikolishi elifanelekileyo okanye iyunivesithi kuwumsebenzi onzima kubo bonke abafundi, kodwa kubafundi abanokukhubazeka ukufunda, ezinye iinkalo ezithatha ukukhetha isikolo esilungileyo zingenza kube nzima nakwabo iintsapho zabo. Kwaba bafundi abaye bafumana isicwangciso se-504 okanye i-IEP ngexesha lephakamileyo samabanga aphezulu, kukho iikholeji neeyunivesithi ezineenkqubo ezinokuba luncedo-kwaye kwiimeko ezininzi, kubalulekile-ukuba baphumelele esikolweni.
Kubafundi abafuna inkxaso eyongezelelweyo ngexesha lekholejini, kukho izikolo ezinikeza iinkqubo ezahlukeneyo ezibandakanya yonke into ukusuka kumntu omnye kwabacebisi kumaqela okufunda. Ukufumanisa inkqubo ehambelana neemfuno zabafundi bakho, kunye nekholejini eya kumenza avuyiswe kwaye akhuthaze, angathatha ingcinga kunye nophando oluninzi. Abazali kufuneka babe yinxalenye yenkqubo yokwenza izigqibo.
Ukuba nesicwangciso se-504 okanye i-IEP kwindawo, kukuba inxalenye enkulu, kubalulekile ukuba kwamkelwe kule nkqubo. Ukuba umntwana wakho akanalo, kubalulekile ukwenza oko xa eqala isikolo esiphakamileyo ukulungiselela indawo yokuhlala eya kuyifunayo kwiikholeji.
Okubaluleke ngakumbi kubafundi abakhubazekileyo baya kuba ngummeli wabo. Ukuthetha, ukwazisa abaprofeti kunye nabancedisi bokufundisa indawo yokuhlala, ukusebenzisa iinkonzo ezikhoyo kubo, nokuthetha nabo abasemgangathweni ukubanceda nokuzikhokela kuya kubanceda ukuba bahambe ngempumelelo ngezinye iinkqubo kumaziko ekholejini anzima.
Xa u tyelela izikolo ezizayo, qi niseka ukuba uchithe ixesha elithile apho abantu abanokukhubazeka ukufunda bangafumana inkxaso. Ukuba kunokwenzeka, misela intlanganiso kunye nabasebenzi kunye nomfundi ukuba bafumane ingcamango malunga nendlela iziko elisebenza ngayo, zeziphi iinzuzo kunye nokuba ingaba imeko iya kuba yinto efanelekileyo kumntwana wakho.
Ezinye iiprogram zizandla kakhulu kwaye zifuna ukuphendula kumfundi, ngelixa ezinye zininzi zeprogram ye-drop-in.
Ukufunda abafundi abakhubazekile, inkxaso yenkxaso eyenziwa esikolweni kufuneka ibe yinto ephambili ekukhetheni apho usebenza khona kwaye ube khona kwiikholeji. Nangona iqela lebhola lebhola okanye iindibano ezintle zingabonakala ngathi ziphezulu kumfundi wakho, kubalulekile ukuba uyayiqonda ukuba imfesane kunye nemfundo ekhoyo kuye yintoni eya kwenza okanye aphule umsebenzi wakhe wekholeji.
Izikolo ezineenkxaso zokufunda ukukhubazeka
Izikolo ezinkulu zibonelela ngamava emveli "amakhulu," enokuba lunzima kakhulu kubafundi abanokukhubazeka ukufunda. Iiprogram zokuxhaswa ezisetyenziswayo zinokunyusa kakhulu amathuba okuba umfundi uya kulawula izifundo zakhe ngelixa enandipha ubomi benkampus.
IYunivesithi yaseMerika - iWashington DC
I-Support Support Academic Centre (ASAC)
Intlawulo: i-$ 4500 ngonyaka
I-Northeastern University - eBoston, MA
Inkqubo yokukhubazeka yokuFunda (LDP)
Intlawulo: i-$ 2750 nganye nge-semester
I-Rochester Institute of Technology - eRochester, NY
Isiko soNkxaso kwiSikolo
Vula ukubhaliswa kwanoma yimuphi umfundi we-RIT
IYunivesithi yaseArizona - eTucson, AZ
I-Strategic Alternative Learning Techniques (SALT)
Imali: i-2800 yee-semester nganye-abafundi abahlukileyo bezahlulo (ukufundiswa kufakwe)
I-1200 yee-semester nganye-abafundi bezahlulo eziphezulu (ukufundisa i-$ 21 ngeyure)
I-1350 yeenyanga ezintathu-i-coaching life for ADD / ADHD abafundi (ngokuzikhethela)
Izikolo ezincinci zinika abafundi ithuba lokuthandana kunye nokuba yinto enokuba nzima ukufumana kwisikolo esikhulu.
IKorley College - iMilton, MA
Inkqubo yokuPhuthukiswa koFundo (PAL)
Intlawulo: Imali-based based fee, ihlukahluka ngesihloko
IYunivesithi yakwa-Fairleigh Dickinson - Teaneck, NJ
Isiko soMmandla weZakhono zokuFunda
Akukho mrhumo-malilekile kuye nawuphi na umfundi ku-Fairleigh Dickinson
Ikholeji yaseMarist - iPoughkeepsie, NY
Inkqubo yoKhubazeka kokuFunda
Ngokuyinhloko kubafundi abasanda kubafundi
Imali yokufunda iingcali kuphela
IZIKOLO EZIFUNDILEYO KWABAFUNDI ABANCEDO ABAFUNDO
I-Beacon College - Leesburg, FL
Imfuno zo kwamkelwa
Imali: Unako ukufumana ilungelo lokuncitshiswa kwentlawulo yonyango
Ikholeji ye-Landmark - Putney, VT
Ukufundiswa kwabafundi abaneziphene zokufunda
Iimpawu zeMpawu zeMali ze-BMO Lime Ukuxhuma ama-Equity ngokusebenzisa i-Education Scholarship kubafundi abakhubazekileyo
R10 000 kubafundi base-US
Ama-5,000 kwii-Canada abafundi
I-Google Lime Scholarship: kubafundi abakhubazekile abafunda i-computer yesayensi
Ukunyuka kweeScholarship kubafundi abaneziphene zokufunda
Uluhlu olubanzi lweengxowa-mali kunye neenkqubo zoncedo lwezemali ezijoliswe kubafundi abaneentlobo ezahlukeneyo zokukhubazeka ngokomzimba nokufunda, tyelela le website.
Ukufumana ulwazi oluninzi malunga namathuba okongeza ama-scholarship kunye nosizo lwezemali kubafundi abakhubazekile ukufunda, vakashela le website.
Ngaba ufuna ukuhlala usesikhathini kwiindaba zakutshanje zeentsapho ezinezingane zasekholeji kunye nama-20? Bhalisela i-Free Parents Parents Adults namhlanje!
I-Akhawunti ye-Akhawunti: Iimfuno zeProgram kunye neMisebenzi
I-Saber-Toothed Cat Imifanekiso kunye neeprofayili
Iingcaphuno ezibonakalisa ukunyaniseka kwenzondo
Indlela yokuphepha uMdaniso
Iimvelo zeMihlaba: iNdlango
Ii-pianist ze-Jazz: ii-Masters ezili-10 eziye zaguqula i-Genre
Yintoni ongayenza ukuba uNjingalwazi wakho ekuthiyile